Malunga nathi-Jinan Lide Rubber kunye neplastiki Co, Ltd.
Jinan Lide Irubber kunye neplastiki ye-Co.Ltd.Iphakathi kwePingyin Yushan Industrial Park kwiphondo lase Shandong.Ithafa iT Tai isempuma kwinkampani, kwaye emazantsi ilidolophu yaseConfucius.JinanLide yasekwa ngo-2013, amashishini ayo aphambili yimveliso, imatshini kunye nentengiso yeemveliso zeplastiki kunye nerabha. Ngoku, inkampani iphuhlise uthotho lwe-9 kunye neemveliso ezingaphezu kwe-100, ezisetyenziswa ngokubanzi kwimimandla eyahlukeneyo.
Isantya sophando lweemveliso ezintsha zenkampani yethu sikhawuleza kakhulu, kuba sinobuchule bobuchwephesha be-3D kunye noochwephesha. Sithenge oomatshini bokubumba abaliqela be-CNC, kuthatha malunga neentsuku ezi-5 ukulungela ukubumba, kwaye kuthatha malunga neentsuku ezili-10 ukuba iisampulu zikulungele.Ikampani yethu inokuvelisa ukudibanisa irabha eyandisiweyo kunye nokwenza iimveliso ezintsha ze-OEM ngokusekelwe kwiimfuno abathengi.
Inkampani inezixhobo zokuvavanya ezizeleyo, ezinjenge-rotorless curometer, umatshini wokuvavanya intshukumo yomjikelo, umvavanyi wentshukumo ye-angular, umatshini wokuvavanya i-abrasion, umatshini wokuvavanya i-elektroniki indawo yonke, i-oveni yokuguga eshushu, umvavanyi we-irobound, uShore Durometer. Umvavanyi osisigxina wovavanyo
Okwangoku, sifumene i-CE, ukuvunywa kwee-Wras kunye nesitifiketi se-ISO9001. Siza kuqhubeka nokucwangcisa ukuvunywa okutsha ngokweemfuno zentengiso.
Ukusukela ekusekweni kwenkampani, siyagxininisa kumgaqo-nkqubo ophila kumgangatho kunye nophuhliso oxhomekeka kwintengiso elungileyo.INkampani yamkela iseti epheleleyo yezixhobo zokuvelisa nokuvavanya, inkampani iphinde igxile kubuchwephesha, uqeqesho kunye nezinto ezintsha.
Ke, inkampani yenze inkqubo yolawulo oluphezulu lwenqanaba eliphezulu kunye nenethiwekhi yentengiso. Intengiso evelisiweyo isekwe kwimigangatho yesizwe nakwimigangatho yamanye amazwe.kwaye ke ngoku iimpahla zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi, ezinje nge Us, Colombia, HongKong, Singapore, Vietnam, Turkey, Thailand, Algeria, Egypt, Italy , njl njl. iimpahla zethu zizuza igama elihle kubaxhamli bamakhaya nabangaphandle.
Isigama senkonzo yenkampani yethu kukufumana abathengi ngokwenza iimveliso zodidi lokuqala, umgangatho wokuqala, inkonzo ekumgangatho wokuqala, ulawulo lodidi lokuqala kunye nomoya wokwenza izinto ezintsha, kwaye siya kuthi ngokuqhubekayo sanelise iimfuno zabathengi bethu ngokwenza uphando Itekhnoloji entsha yemveliso, izixhobo ezintsha, iimveliso ezintsha kunye neeteknoloji ezintsha. Siyasebenzisana namahlakani ethu ezorhwebo ngokusekelwe kwizibonelelo ezifanayo. Samkela ngokufudumeleyo abathengi ukuba basityelele kwaye baxoxe ngeshishini.